MARKUU XOOGA LAHAA TOLBUU AHAA MAANTA OO UU DHAAWACMAYNA CARIGAAN CIDLADA AH AYAA LOOGA TAGAY!
Friday, 01 June 2018 03:50
Dalka Soomaaliya,mudo nus qarni ah ayaa waxaa saameeyay dhibaato qaran ku dhacda kuwooda uugu xun.suaasha ayaa waxay tahay waa maxay hadaba dhibkaasi? jawaabta oo kooban ayaa ah waa MAQNAANSHO DAWLO. kol hadii qaran waayo dawlada dhexe ee dalka maamusha guud ahaantii,taasoo difaacda bada,hawada,iyo xuduudaha bariga oo dhan,maamusha arimaha dalka gudaha iyo dibadaba,sarayntii sharciga iyo kala danbayntiina meesha kabaxdo,ayaa la yiraahdaa dalkaa waxaa ku dhacay maqnaansho dawlo.
Hadaba wax kastoo aynu soomaray maanta waxaynu leenahay dawlad dib dalkeena uugu soo dabaalaysa wixii kalumay,oo ah dawladnimadii.waxaan oran karaynaa isku dayo farabadan oo dib uraacdayn ah in dib loo yagleelo dawladnimadeenii,waa markii koobaad oo aynu cagta lahelay hanaan dawladnimo oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba soomaalida ku nooli soo dhaweeyeen kuna faraxsan yihiin.maxaayeelay shacabka soomaaliyeed waxa uu arkay hogaan daacad ah oo dadaalaya har iyo habeen.
Waxaadse moodaa in maamulada gobolada qaarkood wali ku sii mashquul san yihiin firkardihii shisheeye ee gumaysi ee dadka soomaaliyeed dhexdooda laysku diraayay si ay isu dabar gooyaan.waxay wali u dhaga nugul yihiin kala qaybinta dadka soomaaliyeed iyo ka hor imaanshaha dawlad dhexe oo xoogleh oo soomaaliya hanata.waxay in kirsan yihiin cadawna ku yihiin in soomaaliya ay leedahay dawlad iyagoo garabka ku haya shisheeyaha dan leeyda ah ee isticmaalya iyaga kuna haysta lacag ay siiyaan iyo in ay ahaadaan madax dalka soomaaliya qayb haysta.
Dagaalka dalkaaga oo cadaw shisheeye soo weeraray,waa xaq in aad difaacataa oo aad u dhimataa.dadka dagan gobolada waqooyi ama Somaaliland,iyo kuwa dagan Puntland waa dad soomaaliyeed oo leh haldal,hal calan,,isku dhalasho,isku diir,isku dad isku diin ah.wax ay kukala duwan yihiin majirto sida dalalka qaarkood tusaale ahaan Ethiopia oo kala ah dad aan wadaagin diin,af,dhalasho midna hadana ah dawlad qura.soomaali hadaynu nahay nasiib ayaan leenahay illaahayna wax weyn ayuu ina siiyay hadaan wax kasayno.
Somaliland maha dawlad laakiin shacabka waxaa lagu hoojiyay dawlad inay jirto layiraahdo Somaliland! xaqiiqduna waxaa weeye goboladaas waxaa ka jira maamul rag fakaray in dadka lagu sii kala hayo intay ka helayaan dawlad soomaaliyeed oo dalka hanata,sidaas ayuuna ahaa hadafkii cigaal oo sheegay in soomaali aysan is hurayn kalana maarmi karaynin.
Muuse Biixi oo ah ninka hada madax waynaha ka ah maamulkaas,ayaa dano la xariira in uu kursigaa xajisto oo sii fadhiyo,iyo in uu ku shaqeeyo arimaha guracan ee dawladaha shisheeye sida ETHIOPIA iyo Emaraadka ayaa shacabkii wada daganaa ee walaalaha ahaa ku yiri dawlad baanahay oo xuduudeena ayaan tagaynaa!! xasuusnoow in xuduud latago ay ka horayso horta dawlad matahay? Muuse si wayn buu uuga dharagsan yahay in uu san lahayn xuduud dawladna ahayn.
Muuse Biixii odayaal iyo niman afmiin shaaro ah,oo uu siiyay lacag ayaa laga soo uu ruuriyay qabiilada oo dagaalka lageeyay,waxay noqdeen wax dhintay wax dhaawac may iyo wax bad baadayba.kii dhintay suaal aakhiraa utaal. kii noolna waa loo baahan yahay in dib loo isticmaalo,kan dhaaawaca ah ee ku soo beelay dagaalkaa khasaaro xubno kamid ah lixdiisii lixaad,shalay waxa uu ahaa nin kusocon karaaya lugu hiisii,laakiin maanta ma awoodo in uu socdo,lug baa go an gacan baa go an mashaqaysan karo. waxaa intaa dheer daryeel daawo iyo xanaano mahaysto,inbadan ayaa daryeel la aantaa u dhimatay.
Nin walboo maanta dhaawac ah,waxaa dultaagan hooyadii iyo aabihii haday nool yihiin,dawo la aan iyo daryeel xumo ayay si silic ah uugu noolyihiin,Muuse Biixi kursigiisuu iska fadhiyaa wax lug ahi kama gu in isaga iyo ilmaadeertiis,iyo caruurtiisa,kuwii jifadiisa ahaa hoose dibadii uqaaday,kuwii kalana shalay waa loo baahnaa tolbay ahaayeen maantana cidlaa muuse biixi kaga dhaqaaqay iyagoo dhaawac halis ah ayayna hada ku ureen gari go an cidla ah.
Waxay u silciyaan oo u dhaawacmeen in kursigaa uu fadhiyo muuse biixi maantayse dhadhamiyeen danbigay ka galeen naftooda iyo dadkooda soomaaliyeedba.garigo an cidla ah ayay ku urayaan. ragbaa dhintay ragbaa dhaawac ah maxaa la gaaray oo xuduud ah? habar wiil keedii dhaawac xumi soo garay ayaa Muuse biixi way diisatay in wiilkeeda dalka gudihiisa waxba looga qaban karayn,sidaa daraadeed ay ka codsanayso in dibada loogu qaado. Muuse wuxuu waydiiyay jifaday tahay habartu!! waxaa layiri waa jifadaas....... reer quruc ah,wuxuu yiri kuwii sacad muuse ayaanba meel u lanahay ee habartu ma maalin ay riyoonaysaa!!.
Adeer markaad dhaawacanto cidlaa lagaaga tagayaa,markaad xooga leedahayna waa lagu isticmaalayaa waayo jaahilbaa tahay aan garanayn,xaaraan iyo xalaal midna oo aan lahayn cilmi diineed iyo mid maadi ah oo kaareeba in lagu seejiyo dantaada aduun iyo aakhiraba. Hadaba ogaada qabiilba qabiil intuu ka badawsan yahay oo ka aqoon yar yahay dagaalada lugaha looga guraa oo saldanaa lagu gaaraa.
Puntland Dr Abdi wali Gaas waa ogtihiin oo dagaalkii waaba laysaga baxay oo beelo gaara ayaa ku riiqmay!! kuwana waaba kabaxeen oo aagiiba baneeyeen,hadana beelihii ayaa rag lugaha laga guro si cabdi wali dib loogu doorto laga soo uruurinayaa qabaa ilada puntland.rag lacag uu soosiiyay Dr Gaas ayaana wiilal yar yar oo mustaqbal lahaa soo uruurinaya intay siyaan dhawr boqol qaadna u qaadaan si lugaha looga soo guro.
Xaliimo ilyaas warsame ayaa wiilkeedii kusoo dhaawacmay dagaalkii TURKARAQ,sidii arinkii SOMALILAND ayaa dhakhaatiirtii ku yiraahdeen habartii waxba halkan lagagama qaban karo wiilkaaga dhaawiciisa ee madaxda puntland waydiiso in laguugu daro kuwa dibada loo qaadayo.
Xaliimo waxay dantii ku qasabtay in ay raadiso Madaxweynaha Puntland oo ka codsato in uu caawiyo Geesigii puntland usoo dhintay xoraynta Tukoraq! hayeeshee xaliimo waxaa imtixaan ku noqday sidii ay u arki lahayd madaxweyne GAAS.Mudo dheer markay isaga daba noqonaysay lakulankiisa,ayaa mid kamid ah shaqaalaha xafiiska Dr gaas waydiiyay duqdii eedo meeshan waa ku arkaayoo subax walba waa timaadaa,waa maxay dhibkaagu intaan kusoo celcelinayaa? waxay tiri maandhoow madaxweyne GAAS ayaan rabay? wuxuu yiri maxaad u raadinaysaa madaxweynuhu hawlo farabadan ayaa u yaala, waxay tiri maandhoow wiilbaa iga dhaawacan oo dalka difaacayay,dibada haloo dhigo ayaana la yiri halkan laguma dawayn karo,dantaasaan u rabay in uu iga caawiyo.
waxa uu yiri iisheeg magacaaga oo sadexan,anaa utagaaya oo intaa kuugu sheegaya iyo in uu ku qaabilo.waxay tiri Xaliimo ilyaas warsame ayaa layiraahdaa maandhaw duca qaba u sheeg. kadibna waxa kamaqnaa 5 daqiiqo waa kusoo noqday oo yiri eedo yaad ahayd? waxay tiri reer qansax..? oo yaad ka ahayd? waxay tiri reer galool? wuu ku noqday dr gaas ayuu u sheegay waxa duqdu tahay,markaasuu qosol ku dhuftay,oo yiri war heedhe cumar maxamuud ayaan dhaawocoodii meel u la ahay xageen geynayaa reer GALOOL!! war habarta i dhaafiya oo carsha.
Wiilkii waa kusoo noqday oo yiri eedo wiilkaaga waxba loomahayo dadbadan baa jira oo dhaawac ah adiguna halkaan haku soo lugu in mardanbe nabadeey.
Markuu xaliimo wiilkeedu xooga lahaa tol buu ahaa waana la isticmaalaayay hadana dhaawiciisii cidlaa looga tagay istaahil dheh!! istaahil dheh,istaahil dheh.
Tukaraq qabiilooyinka iyo jifooyinka iyo shaqsiyaadka badawda ah ee aan lahayn aqoonta iyo ilbaxnimada ayaa lugaha looga gurayaa ee majiro dawlado shisheeye oo dalkeena qabsanaya oo la difaacayaa.Tukaraq soomaali baa leh lahaan jirtay hadana iska leh,ee u jeedadu waa aqoon darada shacabka soomaaliyeed oo ay ka faa iidaysanayaan MUSE BIIXI IYO DR GAAS.
Maanta intaad fayawdahay,ka fakar naftaada aakhiradaada iyo aduunkaba,Tukaraq oo lagu dhintaa lagu dhaawacmaa waa uun khasaare cad.waxaana loogu tala galay jaahilka in lagu xasuuqo kadibna isga uun uu khasaaro.war hooy shacabka soomaaliland iyo puntland hadaa tihiin luguhiina ilaashada hada waad ku socotaa ha dhawse waa laga gooyn.Adeer illaasho lugahaaga ragbaa raba inay kaa gooyaan gaf gaf oo ku curyaamiyaan cidla ku dhigaan fakara.
waxaa xaq ah dawlad baynu leenahay dal jira ayaynu nahay aan ku dhimano danta guud ee dalkeena iyo dawladnimadeena,waayo way banaantahay kan qaadicu dariiqa ah ee dawladnimadeena u dhigta isbaaro in aan la dagaalano,kuwa diinta inoogu soo gabaday ee dhiiga dadkeena banaystay in aan la dagaalano,inagoo difaacanayna qaranimadeena diinteena dadkeena iyo dalkeena iyo dawladnimadeena soomaaliyeed.maha in lugaha laynooga guro dan yaroo shaqsi kursi ilaashanaya iyo qabyaalad foolxun.
Kolhadii shacabkii somaliland aysan garanaynin in dagaalkani yahay mid khasaare u ah aduunkan korkiisa,aakhirana lagu mudan karo cadaab alle,kol hadaysan garanayn in ay leeyihiin awood ah in ay runta u sheegaan madaxdooda,oo ay san oranayn maxaan u dilaynaa walaalahayo punltnad oo aanu nahay dad soomaaliyeed,kol hadii aysan fahan sanayn in iyagu leeyihiin awooda dalka oo ay Muuse biixi ka qaadi karaan kursiga,kol hadii shacabka puntland uusan oranayn dr gaas u dhiman mayno kursigaaga,kaana yeelimayno in aan dilo walaalahayo somaliland oo nala ah soomaali,talo xumadan hadaad keentayna kursiga anagaa shalayba kuu dooranay maantana waa kaa qaadnay,hadaysan sidan shacabka puntland oranaynin,Garbay noqotay in MUUSE BIIXI IYO DR GAAS lugaha ka guraan somaliland iyo puntland.
Qofka soomaaliyeed sadex haduusan ku dhaqmin waligii sharaf yeelan maayo noloshiisuna qiimo yeelan mayso aduunkaan korkiisa.
1.Diintaadu waa islaam iska daa firqo iyo kala qoqob diineed waxaatahay muslim suni ah ku dhag iyadaa kugu filan ee
2.Dalkaagu waa Soomaaliya hayeelin in lagu kala qayb qaybiyo si xoogaaga loo yareeyo laguuna maamusho,difaaco dalkaaga SOOMAALIYA kugu filan.hal calan oo buluug ah xidig cad dhexda ku leh ayaad leedahay,hal madaxwayne ayaad leedahay,xajiso ilaasho iska iloow wax ka hooseeya oo kuu diidaya qaranimada iyo dawladnimada.
3.Dadkaagu waa SOOMAALI matihid qabiil iyo jifo kufaan soomaalinimadaada iyadaa kugu filan iska diid qabiil iyo kala qaybin difaaco soomaalinimadaada.
Adeer wixii aan intaa ahayn waxaad ke heshaa waa hoog iyo halaag iyo caalamka oo ku quursada waligaa iyo dalkaaga oo lagaa dhaxlo mustaqbalka.